आदेश सञ्झ्यालहरूमा सामाग्री मेनु खोल्नुहोस् - रोज्नुहोस् विशेषताहरू
तलका विशेषता प्रकार्यहरू वर्णन, चिठ्ठी "a" प्रतिमाले प्लेसहोल्डरमा दर्साउँदछ जुन तपाईँ विशेष विशेषतामा प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ. तपाईँ यो क्यारेक्टर कुनै अरू क्यारेक्टर सँग प्रतिनीधि गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले छनौट गर्नुभयो ।
न्यून ब्रिभ सँग प्लेसहोल्डर घुसाउनुहोस्। तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ check <?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा।
न्यून ब्रिभ सँग प्लेसहोल्डर घुसाउनुहोस्. तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ ब्रिभ <?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा ।
न्यून ब्रिभ सँग प्लेसहोल्डर घुसाउनुहोस्। तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ circle <?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा।
न्यून ब्रिभ सँग प्लेसहोल्डर घुसाउनुहोस्। तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ vec <?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा।
न्यून ब्रिभ सँग प्लेसहोल्डर घुसाउनुहोस्। तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ tilde <?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा।
सर्कमफ्लेक्स सँग प्लेसहोल्डर घुसाउनुहोस् ("hat"). तपाईँ सिधा प्रविष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ hat <?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा ।
साइन प्रकार्य एउटा प्लेसहोल्डर सँग घुसाउनुहोस्। तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ bar<?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा।
प्लेसहोल्डर सँग चौडा भेक्टर बाँण घुसाउनुहोस्. तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ widevec आदेश सञ्झ्यालहरूमा ।
प्लेसहोल्डर सँग चौडा टिल्ड घुसाउनुहोस्. तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ widetilde सिधा आदेश सञ्झ्यालहरूमा ।
चौडा सर्कमफ्लेक्स घुसाउनुहोस् ("hat") प्लेसहोल्डर सँग. तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ widehat आदेश सञ्झ्यालहरूमा ।
गाढा ढाँचा सँग प्लेसहोल्डर घुसाउनुहोस्. तपाईँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ bold <?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा
प्लेसहोल्डरहरू सँग फन्ट साइज परिमार्जन गर्न आदेश घुसाउनुहोस्. पहिलो प्लेसहोल्डरले फन्ट साइजलाई दर्साउँदछ (उदाहरणका लागि, १२) र दोस्रोले पाठ समावेश गर्दछ. राम्रो बनावटको लागि, मानहरू बीच खाली स्थानहरू घुसाउनुहोस्. तपाईँ सिधा प्रविष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ size <?> <?> आदेश सञ्झ्यालहरूमा.
प्रयोग गर्नुहोस् रङ आदेश तपाईँको सूत्रको रङ परिवर्तन गर्न. टाइप गर्नुहोस् रङ, र रङ नाम टाइप गर्नुहोस् (उपलब्ध रङहरू सेतो, कालो, क्यान, म्यागेन्टा, रातो, निलो, हरियो र पहेंलो हुन्), र सूत्र, क्यारेक्टर वा क्यारेक्टर अनुक्रमणिका. आगत रङ हरियो साइज २० परिणाम हरियो चिठ्ठीमा दिन्छ "a" २० को फन्ट साइज सँग.
nbold र nitalic आदेशहरूले सूत्र अवयवहरूको गाढा वा छड्के पूर्वनिर्धारित फन्टहरू हटाउँदछ. उदाहरणका लागि, x बाट छड्केहरूहटाउनुहोस् सूत्रमा ५ x + ३=२८ टाइप गरेर nitalic x भन्दा अगाडि5nitalic x + ३=२८ जस्तै.
attributes "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" र "vec" सँग स्थिर साइजहरू छन्. तिनीहरूको चौडाइ वा लम्बाइ समायोजन गर्न सकिँदैन जब लामो प्रतीक माथि राख्दा.
साइज परिवर्तनहरूका लागि तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ साइज n, +n, -n, *n र /n , जहाँ n प्लेसहोल्डर हो. यो तरीका प्रयोगशाली छ जब सूत्रको आधार साइज परिवर्तन गर्न विषय हुन्छ. आदेशहरू साइज +n र साइज -n बिन्दु साइज परिवर्तन गर्दछ, र साइज *n र साइज /n प्रतिशतद्वारा साइज परिवर्तन गर्नुहोस्. उदाहरणका लागि, आदेश साइज *१.१७ क्यारेक्टरको साइज बढाउनुहोस् १७% यथार्थ रूपमा.
टिप्पणी गर्नुहोस् कि कुनै प्रविष्टिहरूलाई खाली स्थानहरू आवश्यक छ सहि बनावटका लागि. यो विशेष रूपमा ठीक छ जब तपाईँ विशेषताहरू स्थिर मानहरू सँग निश्चित गर्नुहुन्छ प्लेसहोल्डरहरूको सट्टा.
सूचना विशेषताहरूमा, अनुक्रमणिकाहरू र एक्सपोनेन्टहरू, र स्केलिङले तपाईँको कागजातहरूलाई अझ दक्षको साथ बनावट गर्न मद्दत गर्दछ.
Title is: विशेषताहरू